A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Firefox 80 na ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
A tọhapụrụla ụdị ọhụrụ nke Firefox 80 na ndị a bụ akụkọ ya
Ternyaahụ Mozilla mara ọkwa na mwepụta nke mbipute ọhụrụ nke ihe nchọgharị weebụ gị Firefox 80.0 na Firefox ESR 78.2 / Firefox ESR 68.12.
Na ụdị ọhụrụ a Ihe nchọgharị Mozilla kwa sonyeere òtù ahụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche na ọrụ ngwanrọ maka mgbanwe gaa na nsụgharị “agụnyere”, ebe ọ bụ na Firefox 80 na-ewepu nnabata okwu nnabata iji dochie ya na paswọọdụ nnabata.
“Firefox na-ewepu ngwa ngwa nchọgharị nke achọpụtapụtara dị ka mkparị ma ọ bụ naanị. Anyị na-ege ntị na mkparịta ụka na-eme n'ime obodo Mozilla na ụwa n'ozuzu, ma anyị na-a attentiona ntị mgbe ndị mmadụ gwara anyị na ụfọdụ okwu anyị ji na Firefox wezuga ma merụọ ndị mmadụ ahụ.
“‘ Nna ukwu-ohu ’bụ ihe atụ na-eme ka ịkpa ókè agbụrụ na-aga n’ihu. Firefox na-agba mbọ maka nsonye na nghọta; Anyị achọghị okwu sitere na okwu okwu na-emerụ ahụ mgbe anyị nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ gụnyere nkọwa, nkọwa na enweghị ịkpa ókè agbụrụ. N'ihi nke a, eji Paswọdu Primary dochie ọnọdụ niile nke Paswọdu Master na ihe nchọgharị na ngwaahịa Firefox. "
E wezụga nke ahụ Firefox 80 bụ ụdị izizi nke ihe nchọgharị ahụ iji tinye ndepụta ngọngọ mgbakwunye ọhụrụ.
Mozilla na-ekwusi ike ndọtị ndọtị ihe nchọgharị gị, dị ka obi ọjọọ ma ọ bụ mmebi nzuzo, nke na-egbochi ogbugbu nke mgbakwunye agbakwunye na Firefox. Isi uru nke ndepụta ngọngọ ọhụrụ bụ na ọ na-ebelata oge ọ na-ewe iji buru ibu na nyochaa ndepụta ngọngọ ahụ.
Ọzọ nke mgbanwe na-ike na ụdị Firefox ọhụrụ a bụ nke ahụ nwere ike ịtọ ugbu a dị ka ihe nchọgharị PDF agụ dị ka ndabere na sistemụ iji lelee akwụkwọ PDF.
Ọzọkwa ihe nchọgharị ahụ nwere mmasị ọhụrụ iji gwa ndị ọrụ ma ọ bụrụ na e debere ụdị site na gburugburu na-enweghị nchedo na gburugburu echedoro. Aha ya bụ security.warn_submit_secure_to_insecure.
Animenti na - ebelata maka ndị ọrụ nwere ntọala ngagharị belata.
Ntughari Alt-Tab gbanwere site na 6 ruo 7.
N'akụkụ azụmahịa, emelitere iwu ikikere iji kwado nkwupụta VR.
A naghị ekpughere ọnọdụ Firefox's HTTPS naanị na ntọala kwụsiri Firefox 80.
Na Firefox maka gam akporo:
AV1 na dav1d enyere ndabara na android.
Ikike ịnyagharị ọtụtụ peeji n'ihu ma ọ bụ azụ na ogologo pịa.
Ike dezie aro ọchụchọ tupu ịchọọ.
Ike ime ka ọnọdụ desktọọpụ rụọ maka saịtị iji gbochie redirects na peeji nke mkpanaaka.
Pụta ìhè site na adreesị ozi-e na-egosiputa ọhụrụ nhọrọ iji zipu ozi na adreesị ahụ. N'otu aka ahụ, igosipụta nọmba ekwentị na-eweta nhọrọ nchịkọta nhọrọ ọhụrụ iji kpọọ oku.
Ozi nbanye echekwara na Firefox maka gam akporo enwere ike idezi ya ugbu a.
Nkwado WebRender maka mgbakwunye ndị ọzọ (yana Adreno 6xx GPU).
Ike ihichapụ ọkacha mmasị site na ịdọrọ ha n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri.
Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 80 ọhụrụ na Linux?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụla ụdị ọhụrụ nke Firefox 80 na ndị a bụ akụkọ ya
Ọ bụrụ na nomenclature "master-ohu" disk nwere ọgụgụ nke abụọ, mgbe ahụ "isi igodo" enweghị ya ma ọlị.
Otu ihe ọzọ iji nọgide na-eji Chrome n'agbanyeghị agbanyeghị mmasị Firefox na-eguzogide naanị ya. Enweghị m ike ịnagide nnọkọ oriri na ọ excessiveụ thatụ nke ejiri asụsụ na-agụnye.
A tọhapụrụ Chrome 85 ma ndị a bụ mgbanwe ya
Armbian 20.08, nkesa ARM dabere na Debian na Ubuntu